Daraasad laga sameeyey musuqmaasuqa ka jira degmooyinka iyo gobalada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Daraasad laga sameeyey musuqmaasuqa ka jira degmooyinka iyo gobalada
La daabacay måndag 11 juni 2012 kl 09.42
Musuqmaasuqa ka jira degmooyinka iyo gobalada ma ahan shaqobixiyaasha iyo hay'adaha dowligaa kuwa ogaada, waxaase badanaa soo shaac bixiya shaqsiyaad qaas ah iyo saxaafiyiinta. Sidaas waxaa muujinaya daraasad ay samaysay xaafiiska qaranka "statskontoret" kaas oo maantay dowladda u gudbisay. Daraasad sameeyaasha waxay ku taliyey in sharciga difaacaya shaqaalaha fashila musuqmaasuqa la balaariyo.
Sharciga difaacaya kuwo soo shaaxbiya musuqmaasuqa oo jilicsan, aqoon xumi la xiriirta sharuucda arimahaas quseeya iyo kontroolid xumo la xiriirta sida sharuucda jiraa loo raaco, dhamaan waxyaabahaas waxay ka mid yahiin wax yaabaha ay daraasadaan farta ku fiiqday in ay sabab u tahay musuqmaasuqa ka jira degmooyinka iyo gobalada dalka.
- Wax kayar kalabar ayaa sheegay in musuqmaasuqa yahay su'aalo laga doodo. Taas waxay keeneysaa in lays weeydiiyo sida ugu haboon oo arintaan wax looga qaban karo, ayuu yeri Johan Mörck oo ka mid ah dadka daraasadaan sameeyey.
Markay 2010 iyo 2011 ayaa soo shaac baxday fadeexooyin masuqmaasuq oo ka dhacay degmooyinka qaar ayey dowladda garatay in aqoonta loo leeyhay musuqmaasuqa tahay mid liidata saas darteed waxaa xaafiiska qaranka howl loooga dhigay in ay daraasad ka sameeyaan arintaan. Daraasadaan ay sameysay xaafiiska qaran ayaa maantay loo gudbin doonaa dowladda. Waxaana daraasada ku cad in musuqmaasuqa uu ga guuray dgemooyinka iyo gobalada uuna ku faafay shirkadaha degmooyink.